त्यसैले निहित प्रकृति, मानव छाला टाउको र, तर पनि एकदम खराब ठाउँमा घनिष्ठ क्षेत्रमा मात्र होइन एक खोपडी, छ। र यो एक विशेष समस्या हुन्छ मानिसहरू भने केही महिला सौंदर्य असुविधाको अनुभव गर्न थाल्छन्। गरेको लजालु हुन र सबै भन्दा महिलाहरु को लागि धेरै संवेदनशील मुद्दा स्पर्श छैन गरौं। कसरी माथिल्लो ओठ, मा एन्टेनाइग्यालेक्सिज छुटकारा गर्न त भ्रमित छन् र मानवता को सुन्दर आधा विरक्तलाग्दो जो?
पहिलो, का हरेक स्त्रीको अनुहार मा यस ठाउँमा अनावश्यक कपाल को मालिक छ भनेर भन्न गरौं। तर लगभग गोरा मा तल imperceptible छ एउटा कुरा। यस मामला मा, तपाईं विशेष चिन्ता गर्न सक्दैन र कम से कम प्रभावकारी कुरा पत्ता लगाउन एक भावुक इच्छा मा सौन्दर्य पसलहरूमा को समतल तोड छैन। तर तपाईं के बाल काग को प्रकृति गए भने, र ओठ भन्दा तिमी धेरै देखिने जुङ्गा flaunt? छैन धेरै राम्रो, छैन यो छ?
को प्रश्न भने माथिल्लो ओठ मा बाल हटाउन कसरी चिन्ता गर्न थाले, र अब तपाईं, त्यसपछि के विधिहरू सबैभन्दा प्रभावकारी हुनेछ गरौं। का एक महिला घातक गल्ती गर्दैन मदत र अवस्था बढन गर्न सक्दैन सुझावहरू सुरु गरौँ।
को छुरा बिर्सन्छन्। गाला मा उनको धन्य र आशुक्रोधी stubble सम्झना। बारेमा एन्टेनाइग्यालेक्सिज उन्मुक्ति कसरी सोच गर्दा, तपाईं यस तरिका तिनीहरूलाई हटाउन सुरु हुनेछ, यो चाँडै माथिल्लो ओठ मा एक समान पुरुष वनस्पति मालिक हुनेछ। यो छुरा मात्र बाल विकास, साथै तिनीहरूलाई थप कठोर र बाक्लो बनाउन accelerates प्रमाणित भएको छ।
इरादा गर्दै छन् जो केवल शरीर लागि depilatory क्रीम, प्रयोग नगर्नुहोस्। तिनीहरूले यस्तो नाजुक छाला लागि डिजाइन छैन। फलस्वरूप, तपाईं कम्तिमा एक लगातार राता, वा खत्तम अझै, एउटा वास्तविक जला प्राप्त गर्न सक्छन्। राम्रो यसलाई सुरक्षित प्ले र «अनुहार लागि» को अभिलेखमा एउटा ट्यूब किन्न।
एपिलेटर पनि प्रतिबन्ध लगाइएको। मेशिन होंठ माथिको छाला पुऱ्याउने यस्तो दर मा बाल खींचती। प्रभाव को क्रीम को प्रभाव को समान केहि हुनेछ।
त्यसैले, कसरी आफ्नो अनुहार चोट छैन रूपमा त यस्तो तरिका मा एन्टेनाइग्यालेक्सिज छुटकारा गर्न?
सबै भन्दा राम्रो विकल्प प्रकाश छ। यो आवश्यक लागि बाल कम सजिलै देखिने गर्नेछ विशेष मिश्रण तयार। यसलाई अस्वाभाविक सलोनियां उज्यालो एक रंग मिल्दोजुल्दो छ। यो संरचना र विधि तयारी को:
1 gidroperita ट्याब्लेट;
अमोनिया को आधा चम्मच;
आधा चम्मच तरल साबुन को कुनै पनि ब्रान्ड को।
सबै राम्ररी मिश्रित र छाला को समस्याग्रस्त क्षेत्रमा ध्यान दिएर लागू हुनुपर्छ। एक एलर्जी परीक्षण, बाहिर मेरो बाल डाई पूर्व लगे जो बारेमा के गर्न नबिर्सनुहोला।2वा3मिनेट Incubate र न्यानो पानी कुल्ला। कि पछि, छाला क्रीम moisten सुनिश्चित। पनि पसलहरुमा बेचिएको छ त्यस्तै प्रभाव भएको हो। तिनीहरूले कम allergenic छन्, तर पैसा को एक महत्वपूर्ण बर्बाद हुनेछ।
यस्तो प्रक्रिया बिना ओठ माथि एन्टेनाइग्यालेक्सिज को कसरी छुटकारा प्राप्त गर्न? यहाँ साधारण चिमटी प्रयोग गर्न सम्भव छ। यो यति रूपमा अनावश्यक कपाल को वृद्धि प्रोत्साहित गर्न धेरै छैन ब्लेड। तर, यो प्रक्रिया एकदम दर्दनाक र लामो समयसम्म छ। आखिर, तपाईं स्वयं व्यक्तिगत प्रत्येक बाल हटाउन आवश्यक हुनेछ। दुखाइ कम गर्न, दुई नियमहरू पालन। पहिले, महिनावारी को अपेक्षित शुरू अघि हप्ताको लागि प्रक्रिया सुरु छैन। ती दिन, छाला कुनै पनि stimuli गर्न विशेष संवेदनशील छ। दोश्रो, पहिलो ओठ सुन्दर बरफ को डल्लो। उहाँले केहि पनि बेचैनी कम गर्नेछ।
कसरी सबै एन्टेनाइग्यालेक्सिज को र चाहे त्यो सबै वास्तविक छ छुटकारा प्राप्त गर्न? हो, तपाईं आफूलाई सौंदर्य सैलून को विशेषज्ञहरु अनुमति भने। विशेष उपकरण र विशेष उपकरण अनुहार अनिच्छित बाल हटाउन मात्र होइन, तर पनि आफ्नो थप घटना रोक्न मद्दत गर्नेछ। त्यसैले खाली समय र नगद मा शेयर।
कसरी chelkastyh जस्तै केश बनाउन: नाई सुझावहरू
गर्मी कपाल: आफ्नो हातले उज्ज्वल रंग किसिमहरु
शरद ऋतु Hairstyles। सिर्जना गर्न विकल्प र सुझावहरू
मानिसहरू लागि Hairstyles - सही विकल्प
सुझावहरू मा नङ विस्तार: हामी मैनीक्योर को रहस्य जान्न
को "एन्ड्रोइड" ( "Yandex") निर्देशन त्रुटि मेल सेट अप
किन म नांद मा एक बम्पर चाहिन्छ
सिंचाई के हो? सिंचाई को प्रकार
Ingrown नङ: सम्भव घर उपचार?
जर्मन कार बजार: एक प्रयोग कार किन्न
दाल - यो के हो? स्वादिष्ट दाल। दाल: सरल व्यञ्जनहरु
कसरी पेन्सिल छाती आकर्षित गर्न
Windows7अनुकूलन र इष्टतम प्रदर्शन सुनिश्चित गर्न कसरी
Mummies बारेमा अज्ञात सत्य